कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न यी ७ उपाय अपनाउनुस् ! सेयर गरौ « Online Tv Nepal
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न यी ७ उपाय अपनाउनुस् ! सेयर गरौ
Published :6March, 2020 6:27 pm
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अहिलेसम्म विश्वभर करिब ३ हजार ३ सय भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने करीब ९१ हजार मानिस संक्रमित छन् ।
कोरोनाको प्रभावबाट ग्रस्त चीन र भारतमा समेत कोरोनाको संक्रमण भेटिएपछि विश्व स्वास्थ संगठनले नेपाललाई पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा राखेको छ ।
कोरोनाको संक्रमणको सबैभन्दा ठुलो खतरा भनेको अहिलेसम्म उपचार पत्ता लाग्न नसक्दा यसका संक्रमितको मृत्यु हुने संभावना हुन्छ । तर उच्च जोखिममा परेको नेपालले भने अझैसम्म यसबारे सचेतना दिइएको छैन ।
हामी कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न केहि टिप्सहरु दिदैँछौं, जसको पालना गरे धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ।
यदि तपाईंमा कोरोनाको संक्रमित कुनै लक्षण मिल्दो छ भने यसलाई अनदेखा नगर्नुहोला । अर्थात ज्वरो, खोकी, हाच्छ्यु वा श्वास फेर्न समस्या भइरहेको छ भने तुरुन्त स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्दछ । साथै संभावित लक्षण मिल्दो भएमा यसलाई पाल्नुको सट्टा तत्काल निको पार्ने प्रयाश गर्नुपर्दछ । तर आफै औषधि किनेर खा